News - Anọ ọrụ bụ isi nke igwe kwụ otu ebe
Anọ bụ isi nke ọgba tum tum taya
1. Kwado ibu na ibu nke ụgbọ ala ahụ:
kwado ịdị arọ nke ahụ ụgbọ ala, ndị ọrụ, akpa, wdg, ọkachasị iji olu ikuku na nrụgide na taya iji kwado ịdị arọ na ibu nke ahụ ụgbọ ala, yabụ ọ dị ezigbo mkpa ijigide nrụgide ikuku kwesịrị ekwesị.
Nnyefe 2 nke ike ịdọ aka na ike braking:
iji mee ka ụgbọ ala ahụ gaa n'ihu ma ọ bụ kwụsị, ọ dị mkpa iji nyefee ike nke engine na breeki n'okporo ụzọ. Nke a bụ tumadi na esemokwu esemokwu nke roba. Mgbe njedebe nke taya gafere njedebe nke ịmalite ngwa ngwa ma ọ bụ braking mberede, ọ dị mfe ime ka ịgbachi na skidding nke ụgbọ ala, nke dị oke egwu.
3 Gbanwee ma dozie ụzọ ụgbọ ala ahụ:
n'okpuru ikike nke onye isi ụgbọ ala, ụgbọ ala ahụ na-atụgharị ma ọ bụ na-aga n'ihu n'ihu n'ụzọ a chọrọ. A na-arụ ọrụ a n'ụzọ kachasị site na esemokwu na elasticity nke taya na nkwụsi ike nke usoro taya. Ozugbo ọsọ ntụgharị gafere njedebe nke taya ahụ, ọ gaghị ekwe omume ịkwaga na ntụziaka achọrọ, nke dị oke egwu. Ya mere, biko attentionaa ntị na-agba ịnyịnya Car ọsọ.
4. Dị mfe mmetụta n'okporo ụzọ:
Nke a bụ ihe a na-akpọ "nkasi obi na-akwọ ụgbọala" arụmọrụ, nke nwere ike belata bumps kpatara site n'okporo ụzọ na-adịghị mma. Ọrụ a bụ tumadi site na ikuku ikuku na nrụgide na taya, elasticity nke roba na elasticity nke taya Ọdịdị. Ya mere, nrụgide taya ahụ agaghị adị elu ma ọ bụ dị ala. Biko debe ya na nrụgide taya kwesịrị ekwesị.
China Concrete igwekota, PU Wheel, China PU wiil, China Pu ụfụfụ Wheel, Concrete igwekota Truck, Caster ụkwụ anọ,